Vaovao - Ny maha-zava-dehibe ny fanamboarana azy
Ny maha-zava-dehibe ny fanamboarana
Tombony namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa:
1. Vidiny azo isafidianana: ny mpanjifa dia afaka manamboatra ny fomba amam-bidy mifanaraka amin'ny vondrona mpanjifany, mba hahafantarana tsara ny habaka ahazoana tombony.
2. Ny lamba tsy voatery: ny fanao dia afaka misafidy malalaka ny lamba ampiasain'ny akanjo, arakaraka ny toe-javatra misy azy ireo mba hisafidianana ilay lamba tadiavina, ny takiana samihafa amin'ny lamba dia azo tanterahina, te hahatratra ny vokatry ny akanjo, mety ho aseho amin'ny alàlan'ny lamba!
3. Ny loko tsy voatery: ny loko dia afaka mampifangaro tsara kokoa ireo singa malaza amin'ny vanim-potoana, arakaraka ny toetra mampiavaka ny fomba, misafidy lamaody kokoa, mety kokoa amin'ity volon'ny lamba ity.
4. Fomba azo atao: ny mpanjifa dia afaka misafidy amin'ireo fomba tsy miankina novolavolain'ny orinasanay, ary afaka mamolavola fomba mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa koa. Ny mpamorona dia hifandray amin'ny mpanjifa, hahatakatra tsara ny hevitry ny mpanjifa ary hanatsara hatrany ny sary famolavolana, mandra-pahatongan'ny akanjo. Amin'ity dingana ity dia hiezaka ny hamolavola endrika amin'ny antsipiriany ny mpamorona mba hanehoana ny fahasamihafan'ny fomba sy ny lamaody. Ity fomba fahalalahana miasa ity dia somary lehibe, afaka mahazo ny fomba tiany ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny faran'izay betsaka mba hialana amin'ny famerenana ny fomba eo amin'ny tsena, dia ho avo kokoa ny fahafaham-po.
5. Karazan-tsafidy tsy voatery: ny fomba fitafiana samy hafa ao amin'ilay kinova dia hanana fahasamihafana lehibe ihany koa, mba hanehoana tsara kokoa ny fiakanjoan'ny akanjo, fizarana fanontana matihanina amin'ny fahombiazana voalohany dia miorina amin'ny vokatry ny fiezahana mitohy hanitsy ny kinova amin'ny na oviana na oviana, mba hahazoana antoka fa ny fisehon'ny akanjo dia marina tanteraka, mba hahatratrarana ny fitafy mety tsara indrindra. Raha ampitahaina amin'ny akanjo tsotra eny an-tsena, ny fomba sy ny lamina vita arakaraka ny takian'ny mpanjifa dia kanto kokoa amin'ny asa tanana ary amin'ny fomba mahazatra, izay afaka mifanaraka amin'ny tinady eo amin'ny tsena.